पूरा लेख: अशान्त संसारमा मनको शान्ति
येशूले अन्धकारको निम्ति ज्योति, कलहको निम्ति शान्ति, शोकको निम्ति आनन्द, निराशाको निम्ति आशा, र मृत्युको निम्ति जीवन प्रदान गर्नुहुन्छ। उहाँले यूहन्ना १४:२७ मा भन्नुहुन्छ, “शान्ति म तिमीहरूसँग छोडिराख्‍छु। म आफ्नो शान्ति तिमीहरूलाई दिन्छु। ... तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्‌ र भयभीत नहोस्‌।”
जब तपाईं पापको गह्रौँ भारीले थिचिएको महसुस गर्नुहुन्छ, तब तपाईंको लागि उपाय यो हो: “पश्चात्ताप गर्नुहोस्‌ र फर्कनुहोस्‌, कि तपाईंहरूका पाप मेटिऊन्‌” (प्रेरित ३:१९)। येशूले तपाईंलाई सबैभन्दा अर्थपूर्ण, जीवन परिवर्तनको अनुभव गर्नको लागि निम्तो दिनुहुन्छ। येशूले भन्नुभयो, “हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, मकहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु” (मत्ती ११:२८)। पहिलो यूहन्नाको पुस्तक १ अध्यायको ९ पदले प्रतिज्ञा गर्छ, “यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्‍यौं भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ, र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्‍वासयोग्‍य र धर्मी हुनुहुन्छ।” के तपाईं उहाँको निम्तोलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ?
ख्रीष्टियानको रूपमा, परमेश्वरमा विश्वास गर्नु र उहाँको वास्तामा भरोसा गर्नु भनेको डर र चिन्ताको उपचार गर्नु हो। अनन्तदेखि अनन्तसम्म नबदलिनुहुने परमेश्वरमा भरोसा गर्नुमा कति आराम छ। उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र हामीलाई सदैव वास्ता गर्नुहुनेछ। त्यसैले, किन चिन्ता गर्ने र व्याकुल हुने? पहिलो पत्रुस ५ अध्यायको ७ पदमा लेखे जस्तै अभ्यास गर्न सिक्नुहोस्‌, “तिमीहरूका सारा फिक्री उहाँलाई सुम्‍पिदेओ, किनकि उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ।” हामीलाई यस्तो प्रतिज्ञा पनि दिइएको छ, “जसको मन तपाईंमा अड़िएको छ, त्यसलाई तपाईंले पूरा शान्तिमा राख्नुहुन्छ, किनभने त्यसले तपाईंमाथि भरोसा राख्छ” (यशैया २६:३)।